Softmedal - Khuphela iSoftware yasimahla, i-Android Game APK
Isakhelo sophuhliso lwesicelo esiphathwayo I-Flutter yinkqubo ephezulu yesakhelo sophuhliso lwesicelo. Ngenkqubo exhaswa nguGoogle, unokukhulisa usetyenziso lwakho lweselfowuni ngokukhawuleza nangakumbi ngokusebenzayo. Ndingatsho ukuba iFlutter, esisakhelo esihle kakhulu ngokubhekisele kufakelo kunye nokusetyenziswa, iya kuthakazelelwa...
Injini engabonakaliyo 4 yenye yeenjini zomdlalo ezisetyenziselwa ukuphuhlisa imidlalo yevidiyo. Ingasetyenziswa naphina ukusuka kwimidlalo yeqonga ukuya kumaqonga eVR. Injini engabonakaliyo 4 iyinjini yomdlalo. Injini ye-Unrael, ephuhliswe yiMidlalo ye-Epic, ikhokelele kwimidlalo emininzi eyimpumelelo ukuza kuthi ga ngoku. Le injini,...
Android Studio yinkqubo esemthethweni nesimahla kaGoogle onokuyisebenzisa ukuphuhlisa usetyenziso lwe-Android. Android Isitudiyo yinkqubo ebanzi kwaye yasimahla eyilelwe abaphuhlisi besicelo se-Android. Inkqubo iza nezixhobo ezininzi zokuphucula i-Android.Ngoku Android Studio, enokukunceda ukusombulula iingxaki ngokulula, awunakuphucula...
Anaconda Navigator ngazo zonke izixhobo eziyimfuneko kwabo bafuna ukuphuhlisa iPython kwiWindows. Ukuhanjiswa kweAnaconda; Ibandakanya zonke izixhobo zokuphucula eziza kwenza kube lula kuwe ukuphuhlisa usetyenziso lokufunda ngomatshini kunye ne-python Ezinye ze-IDE yesayensi yedatha eza kwiAnaconda Navigator; Isoftware enje ngeJupyter,...
Umhleli weKate ngumhleli wombhalo weWindows. U-Kate ngumhleli wokubhaliweyo ojongwa ngeendlela ezininzi yi-KDE enokusebenza ngamaxwebhu amaninzi. Ukubandakanya ukusongelwa kwekhowudi, ukuqaqanjiswa kwes syntax, ukusongelwa kwegama elinamandla, isiseko esigxunyekweyo, ujongano olubanzi lwe-plug-in, kunye nenkxaso elula yokubhala,...
I-Malware Hunter yinkqubo ekunceda ukukhusela kwiintsholongwane. ukuskena nokususa iintsholongwane kwikhompyuter yakho. I-Malware Hunter isebenzisa i-injini ye-Avira yokuchonga intsholongwane ukuchonga intsholongwane kwaye ke inokubamba iziphumo ezichanekileyo. I-Malware Hunter ikunika iindlela ezintathu zokuskena ukuskena...
Indlela elula yokwenza iimvavanyo zokhuseleko kwiiprojekthi zakho. IMetasploit yisoftware yokhuseleko ebonelela ngolwazi malunga nokuba sesichengeni, inceda kuvavanyo lokungena kunye nophuhliso lokutyikitywa kwe-IDS. I-Metasploit ikunceda ukuba wenze okungaphezulu kokuqinisekisa ukuba semngciphekweni, ukulawula uvavanyo lwezokhuseleko,...
Windscribe (Khuphela): Eyona nkqubo yasimahla yeVPN Windscribe ime kunye neempawu zayo eziphambili kwisicwangciso sasimahla. Inkqubo yeVPN, evumela ukusetyenziswa kwedatha yasimahla engaphezulu kwe-10GB, ibonelela ngeempawu ezinikezelwa zii-VPN ezihlawulelweyo ezinje nge-firewall, i-ad blocker, i-tracker blocker, isantya sokulawula,...
I-AVG ekhuselekileyo iVPN isoftware yeVPN yasimahla yeWindows PC (ikhompyuter). Faka i-AVG VPN ngoku ukukhusela inethiwekhi yakho ye-WiFi kwaye ukhangele ngokungaziwa. I-AVG iVPN ekhuselekileyo okanye i-AVG VPN yinkqubo yasimahla yeVPN enikezelwa kwiWindows PC, ikhompyuter ye-Mac, ifowuni ye-Android kunye nabasebenzisi be-iPhone....
Ngesicelo seClever Dictionary, unokukhangela ulwazi olufunayo kwizixhobo ezisemgangathweni. Isicelo seClever Dictionary sipapashwa njengenkqubo yasimahla onokuyisebenzisa ngelixa usenza naluphi na ulwazi okanye uphando lwedatha kwiikhompyuter zakho kwaye oluveza iziphumo zolwazi olufunwayo kwimithombo emininzi. Nangona ujongano...
Ukuba ufuna ukubona iinkwenkwezi, iiplanethi, i-nebulae kunye nendlela yobisi esibhakabhakeni kwindawo yakho ngaphandle kweteleskopu, iStellarium izisa indawo engaziwayo kwindawo yekhompyuter yakho kwi3D. I-Stellarium ijika ikhompyuter yakho ibe yindawo yokubonisa umhlaba simahla. Ungaya kuhambo olumangalisayo ngenkqubo ebonisa...
Unokusika iimilo kunye neetekisi nge-Easy Cut Studio Easy Cut Studio yinkqubo yokusika imilo evumela abasebenzisi ukuba basike nayiphi na i-TrueType okanye ifonti ye-OpenType, basike i-SVG okanye iPDF. I-Easy Cut Studio ayivumeli kuphela abasebenzisi ukuba basike iifom kunye neemilo kumaxwebhu, kodwa ikwanceda ukusika iimilo okanye...
I-DWG FastView yinkqubo eyenzelwe ukuba ujonge ngokulula i-AutoCAD esebenza kwiikhompyuter ezisekwe kwiWindows. DWG FastView, DWG kunye DXF njl kwiWindows. Yinkqubo ekuvumela ukuba ujonge iifayile kunye nezandiso. Inkqubo ebizwa ngokuba yi-AutoCAD yenye yeenkqubo ezinokusetyenziswa phantse kuwo onke amabakala afuna ukuzoba...
Загрузка Ashampoo Photo Optimizer 2018 находится в верхней части поиска для тех, кому нужна бесплатная программа для редактирования фотографий. Ashampoo Photo Optimizer 2018 - это приложение для редактирования фотографий, используемое на компьютерах под управлением Windows. Ashampoo Photo Optimizer 2018 выделяется как одно из выдающихся...
Jonga iifoto zakho ngelahleko esemgangathweni zero. I-WonderFox Photo Watermark yinkqubo onokuyisebenzisa ukongeza ii-watermark kwiifoto ezikwikhompyuter yakho yeWindows. Ndithetha ngenkqubo enkulu enikezela ngaphezulu kwe-150 yezixhobo zokubukela simahla, inkxaso kuzo zombini iifoto zemifanekiso kunye nokubhaliweyo, iitemplate esele...
Ngokufihla isiFolda esiFihliweyo, ungazifihla iifayile kunye neefolda zakho simahla, ukuthintela abanye ekufikeleleni kwidatha yakho yabucala. Isilumko esineFowulda isiFayili simahla kunye nesixhobo sokufihla ifolda. Abasebenzisi banokufihla iifayile kunye neefolda zabo kwizahlulo zengingqi okanye izixhobo ezisuswayo ngoncedo lwenkqubo....
Phila ngesantya ngumdlalo wokulinganisa wokubaleka ongawudlala kwiikhompyuter zenkqubo yokusebenza yeWindows. Phila ngesantya yenye yezona midlalo zidumileyo apho bonke abadlali abafuna ukuthatha inxaxheba kwimidlalo yokulinganisa eyiyo kufuneka bakhethe. Ukuba ufuna ukonwabela lo mdlalo apho uncedo lokuqhuba alufumaneki kubasebenzisi...
I-PES 2021 Lite iyadlala kwiPC! Ukuba ujonga umdlalo webhola ekhatywayo yasimahla, i-eFootball PES 2021 Lite yingcebiso yethu. I-PES 2021 Lite PC yaqala yabalindele umdlalo webhola ekhatywayo we-PES yasimahla! Umdlalo webhola ekhatywayo i-eFootball i-PES 2021 Lite, egcinwe kangangeFIFA kwi-PC, kwiikhonsoli nakwiselfowuni, ngoku...
I-Notepad3 ngumhleli onokuthi ubhale ngayo ikhowudi kwizixhobo zakho zeWindows. I-Notepad3, eyaphuhliswa ngokuchasene ne-Notepad, engazange itshintshe kwaye ivuselelwe kwiminyaka engama-20 yembali yeWindows kwaye eyilelwe ukusetyenziswa ngabaphuhlisi besoftware, inokuxhasa iilwimi ezininzi. xeshanye. Ikwangumhleli wombhalo osekwe...
I-Anno 1800 ikhutshwa njengomdlalo weqhinga. I-Anno 1800 yinguqulelo yowama-2019 yomdlalo weqhinga obusele uphuhliso iminyaka emininzi. I-Anno 1800, ephuculwe yiBlue Byte kwaye yapapashwa ngu-Ubisoft, ime njengenye yeendlela zemidlalo eziqulunqwe ixesha elide. I-Anno 1800, eyahlukileyo kweminye imidlalo yeqhinga ngesakhiwo sayo...
Molo uMmelwane 2 ukwiStam! Molo ngummelwane 2 Alpha 1, yenye yezona midlalo zibalaseleyo zoyikekayo kwiPC, ngoku ziyafumaneka simahla. Molo ngummelwane 2 Alpha 1 yayifumaneka simahla simahla ngaphambi kokuba uMmelwane Wommelwane 2 akhululwe. Molo ngummelwane, yenye yezona midlalo zibalaseleyo zoyikekayo kwi-PC nakwiselfowuni, yinto...
I-Maxnote iyinqaku ethatha isicelo onokuyisebenzisa kakuhle kwinkqubo yokusebenza yeWindows. I-Maxnote inqaku elithatha isicelo ongasisebenzisa kwikhompyuter yakho.UMaxnot unikezela phantse yonke into abo bakhuphisana nayo abanokuyenza simahla kule ndawo inokhuphiswano. Ungafaka inqaku kwisicelo ngaphakathi kwemizuzwana embalwa kwaye...
I-Image Tuner yinkqubo yasimahla kunye nenempumelelo yokuhlela umfanekiso onokwenza ngokulula ukuhlela kwakho kwemihla ngemihla. Abasebenzisi abaninzi abayidingi imisebenzi yenkqubo efana neFotohop ukwenza into elula neqhelekileyo yokuqhatha imifanekiso. Kuba, ngokubanzi, imisebenzi yemihla ngemihla esiyenzayo ngeefayile zemifanekiso;...
Ukuhlengahlengisa sisicelo esilungisa iipikseli zomfanekiso owandisayo kwaye uvelise umfanekiso okwinqanaba elingcono. Ukuhlengahlengisa luhlobo lwesicelo sokuhlela umfanekiso. Kuya kufuneka ukuba ubone ukuba umgangatho wawo nawuphi na umfanekiso onesisombululo esisezantsi uyancipha xa usizisa kumgangatho wesisombululo esiphakamileyo...
I-PDF yokuvula sisicelo esenziwe yi-Uconomix esusa amagama agqithisiweyo kwiifayile zePDF. I-PDF Unlock yinkqubo yokuvula iifayile ezifihliweyo zePDF.Ukuvula i-PDF kuya kufakwa kwakamsinya emva kokucofa kwifayile yokufaka kwaye baya kukusa kwangoko kwiscreen sasekhaya. Kodwa ngaphambi kokufikelela kweli nqanaba, qiniseka ukuba iNET...
ICyber ​​Dust yinkqubo yemiyalezo ekhawulezileyo enenkqubo efana ne-Snapchat enokuthi icime imiyalezo ngokuzenzekelayo. ICyber ​​Dust ibonelela ngokususwa okuzenzekelayo kwemiyalezo yakho emva kwexesha elithile ngelixa uncokola nabahlobo okanye abantu kwihlabathi liphela, kwaye sisicelo esinokusetyenziswa kwiselfowuni kunye neepilisi...
Izixhobo zeDAEMON Lite yinkqubo yokudala idiski yasimahla onokuvula ngokulula iifayile zemifanekiso nge-ISO, BIN, CUE extensions ngokwenza iidiski ezibonakalayo. Izixhobo zeDAEMON Lite sisoftware yasimahla nethembekileyo evumela abasebenzisi ukuba benze ngokukhawuleza nangokulula iidiski (zokuqhuba) kwiikhompyuter zabo. Ngoncedo...
Ukuba ujonga umphathi wefayile okhawulezayo kunye nokhawulezayo ukulawula iifayile zakho, unokuzama iOrion File Manager application. Isicelo somphathi wefayile yeOrion sikuvumela ukuba ucwangcise ngokulula iifayile zakho kwizixhobo zakho ze-Android.Ukuba ufuna ukuhlela ngokulula iividiyo, imifanekiso, amaxwebhu, umculo, iifayile ze-APK...
Ilungelo lokushicilela © 2021, softmedal.com. Onke Amalungelo Agciniwe. Softmedal ikunika ithuba lokukhuphela isoftware ye-pc yasimahla, i-APK ye-android kunye nomdlalo. Ungafumana imidlalo ye-android eyaziwayo kuleqonga lokukhuphela simahla!